Soo dejisan Line 5.5.1 – Android – Vessoft
Line – software ah si ay isgaadhsiin u dhexeeya isticmaale adduunka oo dhan. Muuqaaladan ugu weyn ee software-ka waxaa ka mid ah: sarrifka ee isgaarsiinta fariimaha qoraalka ah, cod iyo video, mail cod, sarrifka ee photos, iwm Line kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan ah CHAT oo shir ama koox, wargeliyo saaxiibo ah oo ku saabsan dhacdooyinka kala duwan via news Lamase muujiyaan dareenka isdhaafsiga dhoolo-ka. Software ayaa u saamaxaaya in ay subscribe iyo in ay la socdaan caanka jecel yahay, bulshooyinka iyo bandhigyada TV. Line ayaa sidoo kale ku jira ku riyootaan dukaanka gudaha kuu ogolaanaya in aad kordhiso ku set ee dhoolo faraxsan iyo stickers funny la image ee characters caan ah.
Exchange farriimaha iyo files
Kartida nalugu bulshada kala duwan
Set badan oo dhoolo-xiiso leh
العربية, English, Français, Español... Wattpad 6.7.2